Munaasibad ballaadhan oo loo sameeyay Xuska Dhalashada Rasuulka (CSW) oo Hargeysa lagu qabtay | Somaliland.Org
February 25, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Munaasibad lagu xusayay Dhalashada Rasuulka (CSW) oo ku beegan 12 bishan Rabiicul-Awal, isla markaana waafaqsan maalinta beri ah, ayaa maanta lagu qabtay Hutel Maansoor ee Magaalada Hargeysa.
Munaasibaddan oo ahayd mid si wayn loo soo agaasimay, laguna qabtay Hutel Maansoor ee magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay masuuliyiin sare oo ka kala socday Axsaabta Siyaasadda iyo Xukuumadda, kana mid ahaayeen, Guddoomiye-xigeenka Xisbiga UCID Aadan Maxamed Mire (Waqaf), Afhayeenka Xisbigaas Xasan Xusseen Codyare, Xoghayaha guud ee UDUB Jaamac Yaasiin Faarax iyo Wasiirada, Dhalinyarta iyo Ciyaaraha Muxumed Siciid Maxamed, Duulista Hawada Cali Maxamed Waran-cadde iyo Dib-u-dejinta Maxamed Cismaan Yuusuf. Waxa kale oo munaasibaddaa ka qayb galay Shirguddoonnada labada Aqal Baarlamaan ee Guurtida iyo Wakiilada.
Ugu horrayn waxa munaasibaddaas ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Sh. Faarax oo ka socday Wasaaradda Diinta iyo Aw-Qaafta, oo ku dheeraaday muhiimadda Xuska iyo waynaynta maalinta Dhalashada Rasuulka (CSW), waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diray guud ahaan Muslimiinta Dunida. “Waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa guud ahaan Umadda Islaamka xuska dhalashada Rasuulka (CSW) awgeed..Ilaahay wuxuu quraankiisa ku yidhi, Rasuulka Allow waxaanu kuu dirnay Caalamka oo dhan Jin iyo Insi-ba. Anigoo ka Wakiil ahWasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta, waxaan jeclahay in aan la socodsiiyo dadka uu wali mugdigu kaga jiro dhalashadii Rasuulka (CSW) ee aanu maq-maqlayno inay meelahaa ka leeyihiin in aanay dhalashada Rasuulku qiimo la lahayn iyaga in Dhalashada Rasuulku ay qiime wayn ugu fadhido guud ahaan Caalamka Islaamka oo dhan.” Ayuu yidhi Sheekh Cabdiraxmaan Sh. Faarax.
Waxa sidoo kale halkaa Sheekh Khaliif Sh. Xasan Gudaal oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Guurtida Somaliland oo ku dheeraaday fadliga Umadda Nebi Muxamed (CSW) iyo waxay kaga duwan tahay Umadaha kale. “Xuska dhalashada Rasuulku (CSW) wax yar iyo sunne fudud ha moodina ee wuxuu xambaarsan yahay saddex waajib; xubbiga ama Jacaylka Nebiga, waayo waa faral in Rasuulka (CSW) la jeclaadaa, Salliga iyo in lagu salliyo Rasuulka (CSW) iyo waajibka saddexaad oo ah in dadka la baro jacaylka Nebiga (CSW) oo Caruurta iyo dadkaba la baro. Maalinta xuska dhalashada Rasuulku (CSW) soo gasho saddexdaas waajib ayuu xambaarsan yahay.” Ayuu yidhi Sheekhu. Waxaanu naqdiyay taariikhda Miilaadiga ah ee la isticmaalo oo uu sheegay inay ka wacan tahay in Ubadka iyo Dadkaba lagu barbaariyo Taariikhda Islaamiga ah.
Sheekh Khaliif wuxuu baaq u jeediyay dadka ku nool Hargeysa. “Waar Reer Hargeysoow afar kelmadood iska daaya; waxaasi waa Kufaar, way badatay kelmaddaasi ee iska daaya. Waxaasi waa xaaraam. Waa khuraafaad, iyana iska daaya. Waxa kale oo aad iska daysaan kelmadda waxba-kama-jiraan. Waar afartaa kelmadood iska daaya caaqiidada ayay wax yeelaysaa oo dad bay wax u dhimaysaa yaqiintooda’e.” ayuu yidhi Sheekh Khaliif.
Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex Maxamed Cabdi Daa’uud oo isna halkaa ka hadlay, ayaa ku dheeraaday taariikhda mad-habaha Diinta Islaamka, waxaanu ku dheeraaday halka ay salka ku kala hayaan. Badhasaabku wuxuu Culimada Somaliland ugu baaqay in wixii lagu kala qaybsamo ee la xidhiidha Diinta si caqli ku jiro looga doodo, isla markaana la wadaago doodo caafimaad qaba.
Waxa kale oo isna halkaa ka hadlay Xil. Axmed-Yaasiin Sh. Cali Ayaanle oo ka mid ah Golaha Wakiilada Somaliland. “Qofka wax wanaagsan bilaaba Rasuulka (CSW) ayaa sheegay in uu ajarkeeda leeyahay ilaa inta la wado..Dhalashada Rasuulkana (CSW), isaga laf ahaantiisa ayaa xusay oo wuxuu ku xusay Soon..Malakul-Jibriil ayaa Nebiga (CSW) u bushaareeyay oo ugu bushaareeyay in aan Ilaahay magaciisa la xusayn, ilaa uu la socdo Magaca Rasuulku.” Ayaa ka mid ahaa hadalladii uu Xildhibaanku halkaa ka jeediyay, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Rasuulka (CSW) ayaa maalin Ciid ah soo maray Haween Daf tumaya oo Rasuulka ammaanaya, markaas ayuu isna yidhi, wallaahi aniguba waan idin jeclahay..Waxase isweydiin leh haddii Xuska dhalashada Rasuulku (CSW) dembi tahay, Rasuulku tartanka Quraanka Kariimka ah lagu tartamo xifdigiisa ma qaban oo kamay sugnaan, ee maxaa loo qabtaa? Waxa wanaagsan in aan umadda lagu wareerin wax aan jirin.”
Gebogebadii, munaasibaddan oo ay dhextaal u ahaayeen Qasiidooyin iyo Nebi-Ammaan ay qaadayeen dhalinyaro ku lebbisan Callanka Somaliland, ayaa waxa kale oo ka hadlay culimo kale oo tiro badan oo uu ka mid ahaa Sheekh Cabdilaahi Mataan, kuwaas oo dhammaantood ka waramay muhiimadda xuska dhalashada Rasuulka (CSW).
Previous PostHA IGA OOYINE AAMUS WAA ERAYADII ABWAAN BASHIR SH CUMAR GOODNext PostSoo Dhaweyntii Faysal Cali Waraabe,Hargeysa Part 1 of 2	Blog